200 ထက်ပိုတန်တဲ့သင်ခန်းစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » 200 ထက်ပိုတန်တဲ့သင်ခန်းစာ
Posted by etone on Oct 20, 2010 in Other - Non Channelized | 16 comments
ထမင်းပေါင်းကြိုက်တဲ့လူတွေ ဆူးလေနားကိုရောက်ရင် မစားပဲမနေနိုင်တဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိပါတယ် ။ သူများပြောလို့ ကိုယ်တိုင်ဝင်စားကြည့်မိမှပဲ စိတ်တိုစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်နဲ့ကြုံတော့တယ် ။ ဆိုင်က ဆူးလေဘုရားလမ်းနဲ့ အနော်ရထာလမ်းဒေါင့် မှာရှိပါတယ် ။ Moon နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်နားလောက်မှာပါ ။ လမ်းဘေးဆိုင်လေးမျိုးပါပဲ …။ ထမင်းပေါင်းစားနေတဲ့လူတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ် ရေးထားတဲ့ဆိုင်းပုဒ်ကြောင့်ထင်ပါတယ် ။ ထမင်းပေါင်းတပွဲကို ဘာနဲ့စားစား 600ပါတဲ့ ။ ကြက်၊ ၀က်၊ ဘဲ ၊ သတ်သတ်လွတ်စတာတွေနဲ့စားလို့ရပါတယ် ။ လူပြည့်နေတာကြောင့်မထိုင်တော့ပဲ ပါဆယ် ထမင်းပေါင်းဝက်သားနဲ့ 2ထုတ်မှာလိုက်ပြီး ပိုက်ဆံရှင်းမယ်အလုပ်မှာ တစ်ပွဲကို 800ပါ ထဖြစ်ရော … ရေးထားတာနဲ့ လက်တွေ့နဲ့တလွဲဖြစ်နေပါတယ် ။ ကွာခြားချက် တပွဲကို 200ပေမဲ့ ပလောင်းပလဲလုပ်လို့စိတ်တိုရပါတယ် ။ 200နဲ့မတန်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတော့ရလိုက်တယ် နောက်ဆို ဈေးမေးပြီးမှပဲ ၀ယ်တော့မယ်လို့လေ ။အရင်ကလည်း ကြုံခဲ့ရပါတယ် … ပို့စ်တော့တင်ထားတယ် ချောင်းသာသွားတဲ့လမ်းက စားသောက်ဆိုင် အကြောင်းပါ ။ အားလုံးပဲ အားမနာပဲ ဈေးမေးပြီးမှ မှာစားပါလို့ …:D
(ဆိုင်နာမည် မေ့ခဲ့တယ် ဟီးဟီး… ဇော် တဲ့ )
အော် ….. ဒါကဖြစ်တက်ပါတယ် မြန်မာပြည်မှာလေ နားလည်ပေးလိုက်ပါ …. ကုန်ဈေးနှုန်းက ဒီနေ့နဲ့မနက်ဖြန်တောင်တူတာမဟုတ်ဘူး ….. ၆၀၀ ဆိုတဲ့ဈေးရေးထားတဲ့ဘုတ်က ဘယ်တုန်းကရေးထားမှန်းမှမသိတာ …. အခုဈေးတက်သွားလို့နေမှာပေါ့ ဆိုင်းဘုတ်ပြန်ရေးဖို့ကျတော့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့်မလုပ်ဖြစ်တာနေမှာ …… အခုလိုမျိုးဟာတွေကို အရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်နေမယ်ဆို ပြီးမှာကိုမဟုတ်ဘူး
သမာအာဇီဝမလုပ်စားချင်ပဲ ရတဲ့နည်းနဲ့ လိမ်လည်လှည့်ဖျားချင်တာကို ဘယ်လိုနားလည်ပေးရမှာလဲ … ။ 200ဆိုတဲ့ပိုက်ဆံလေးက မပြောပလောက်ပေမဲ့ လက်တလုံးခြားအလုပ်ခံရတာကို စိတ်တိုလွန်းလို့ပါ ။ ဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီ ပါဆယ်ထုတ်နဲ့တောင် သူ့မျက်နှာကိုပေါက်ပြီး မယူတော့ဘူး နင့်ဟာနင်ပြန်ယူလို့ပေးလိုက်ချင်တယ် … ဒါပေမဲ့လည်း ဘေးကပါတဲ့ချစ်သူကို အားနာလို့
ပီးတော့မြို့ လယ်ခေါင်ကြီးမှာလေ!! ဆိုင်းဘုတ်ပြင်ဖို့အချိန်မရခဲ့ရင်လဲ
ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပေါ့ ဒီလိုပါပဲ နားလည်ပေးတတ်တဲ့ မြန်မာတွေရှိနေလေ
ဟုတ်ဟုတ် …. ဖြစ်တက်ပါတယ် ဖြစ်တက်တာကိုပြောတာပါ ….. ဥပမာ အစိုးရရုံးတွေမှာ ရေးထားတဲ့ဆောင်ပုဒ်တွေများ ကောင်းလိုက်တာ ….. လုပ်ပြန်တော့တစ်ခြားစီ ဒါကြောင့်ပြောတာ ဖြစ်တက်ပါတယ် ဖြစ်တက်ပါတယ် ……
အစိုးရ ရုံးမှာ ရေးတာ `လာဒ်ပေး ရန် မလို´ တလွဲလို့တော့ မပြောပါနဲ့..
အစိုးရရုံးက လူတွေ ဆောင်ပုဒ်နဲ့ လက်တွေ့တခြားစီဆိုတာတော့လက်ခံပါတယ် ဒါပေမဲ့လည်း သူတို့ကို မဖြစ်မနေပတ်သတ်ရတဲ့အခြေနေမို့ အားလုံးက ဆောင်ပုဒ်နဲကလွဲလည်းလွဲစေတော့ဆိုပြီး လက်ခံထားကြပါတယ် … မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်းဆိုသလိုပေါ့…. ။
အခုကိစ္စက ကိုယ်က ကျေကျေနပ်နပ်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဆုံဖြတ်ချက်တစ်ခုကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးဆက်ဆိုတော့.. စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့ဖုတာပေါ့ … ။ လူလည်ကျခံရတဲ့ အခြေနေချင်းတူပေမဲ့ စိတ်ခံစားချက်ချင်းကွာသွားတာပါ ။
လည်ကျတာ .. ချယ်ရီလည်းခံပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒီ
နေ့က မြို့ထဲကိုကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွားရင်း အပြန်ရုံးမှာစားဖို့ဝင်ဝယ်တာ၊မေးတုန်းကတော့ တစ်ပွဲ600တဲ့ အားလုံးပါဆယ်ထုပ်ပြီး ငွေရှင်းတော့မှထမင်းပိုထည့်ပေးလိုက်တယ်
နော် တစ်ပွဲ800 ကျတယ်တဲ့လေ။ တကယ် တော့ အဲ့ဒီငွေပမာဏ ဟာမများပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးဖြစ် သွားတာ ပေါ့နော်။အစတည်းက ဆိုင်မှာစားရင်
600၊ပါဆယ်ထုပ်ရင်800လို့ကြိုပြောလည်းရတာပဲကို … ။ လူတွေခက်ပါတယ်နော်။
ဟုတ်တယ် ချယ်ရီရေ … ဒါမျိုးဆိုရင် အားလုံးသိအောင်ရေးရမယ် ။ မဟုတ်ရင် သူတို့က အခွင့်ကောင်းယူပြီးလုပ်စားနေတာ…။ ဆိုင်းပုဒ်ပြင်ရတာမခက်ပါဘူးကွာ ။ သူ့ဆိုင်းပုဒ်က လက်ရေးနဲ့ရေးထားတာပါ ။ သက်သက်လုပ်စားတာပါ ။
စာ ဖတ် တတ် ပြီး၊ အ ဓိ ပ္ပါယ် နား မ လည် ချင်၊ ဟန် ဆောင် တဲ့၊ တ ကိုယ် ကောင်း ဆန် ၊လူ ယုတ် မာ စီး ပွား ရေး သ မား တွေ ပါ။
ရေ ရှည် ကြီး ပွား မည့် သူ မ ဟုတ် ဘူး၊ဈေး နှုန်း ဆိုင်း ဘုတ် မ ထောင် နှင့် ပေါ့။ ဟို ဂျာ နယ် တ ခု မှာ ရေး ထား သ လို ပေါ့၊ “မြန် မာ တွေ စည်း ကမ်း ရှိ ရှိ၊ နည်း လမ်း သိ သိ ၊ ကြီး ပွား ဘို့ အ ချိန် တန် ပြီ”….ဆို တော့…..စာ မ တတ် ဘူး လို့ ဘဲ၊ ယူ ဆ လိုက် ကြ တာ ပေါ့။
ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ဖိုး ထည့်တွက်တာ နေမှာပါကွယ်…ဒို့လည်း ကြုံဖူးတယ်..အဲဒီဆိုင်တော့ မဟုတ်ဘူး.ဆိပ်ကမ်းသာ လမ်း တစ်ဝိုက်ပဲ..ဆိုင်နာမည်တော့ မေ့သွားလို့။
တစ်ပွဲ ၆၀၀ ဆိုပြီး ဆွဲတော့ လွဲတော့ မလို ခေါ်တယ်။
ပြီးလည်းပြီးရော အသား ပိုထည့်ထားလို့ ဆိုပြီး ၁၀၀၀ တောင်းတာ..ဘာရမလဲ မပေးခဲ့ဘူး။
သူတို့ကို ဘယ်သူကမှလည်း အတင်းထည့်ခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူး။
သူတို့သဘောနဲ့ သူတို့ တောင်းချင်သလို တောင်းနေတာ။
တစ်ခုခု မှား တာ ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ကျွန်တော်လဲ အဲဒီဆိုင်စားဖူးပါတယ် ၆၀၀ ပါပဲ။ လိုက်ပွဲ ပါ ပါသွားလို့ လား မသိ
လိုက်ပွဲမပါပါဘူး ကိုယ်တော်ရယ် ထိုင်စားတာထက်တောင်နည်းပါသေးတယ် ။ ပေးတဲ့အကြောင်းပြချက်ကပါဆယ်မို့ပါတဲ့ ။
အတ္တိသယ၀ုတ္တိ (စာလုံးပေါင်းမှားလားမှန်လားသိတော့ဘူး ဆယ်တန်းအောင်တာ ကြာပြီ )အလကာင်္နဲ့ပြောရင်တော့.. နဖာကလော်နဲ့တစ်ဇွန်းစာလောက်ပဲရှိပါတယ်
ဟားးးးးး …… ဟုတ်ပါပြီ .. ကဲကဲ နောက်ဆိုဘယ်ဆိုင်ဝင်စားစား အရင်ဈေးနှုန်းလေးမေးလိုက်ပေါ့ …. ဒါဆိုအခုလိုအဖြစ်မျိုးကရှောင်နိုင်မှာပေါ့ … ပြဿနာတစ်ခုကို ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဖြေရှင်လို့ရတာကို ဘာဖြစ်ယို့ရှုပ်နေရတာယဲ ……..
ပြသနာတစ်ခုကို ရှုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး ။ အဖြစ်မှန်ကိုပြောပြတာ တခြားလူတွေ တပတ်အရိုက်မခံရဖို့ပဲ ။ အများနဲ့တယောက် အယူအဆမတူတဲ့ leo ရဲ့စိတ်က ထူးဆန်းနေသလားလို့ ။
ဒီကိစ္စ ဘက်မလိုက်ပြောရရင်တော့ အီးတုံး ပြောတဲ့ဟာ မှန်တယ်.. ဘယ်ဟာ မဆို သမာသမတ်ရှိရှိ.. ကိုယ်လုပ်တဲ့ကိစ္စ ကိုယ်တာဝန်ယူသင့်တာပေါ.. ၆၀၀ ဆိုင်းဘုတ်ရှိနေရင် ၆၀၀ နဲ့ ရောင်း မရောင်းနိုင်ရင် ၆၀၀ ကိုပြင် ရှုပ်ချည် နှပ်ချည် မလုပ်ရဘူး။ အခုတမျိုး တော်ကြာ တမျိုး လုပ်တတ်တဲ့ လူတွေက စီးပွားရေး လောကမှာ ဆိုလည်း ဒါဟာ တနပ်စားဥာဏ်တွေဘဲ ဒီလိုလုပ်လို့ တခါဝယ်ပြီး မကျေနပ်ရင် နောက်ထပ် သွားဝယ်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ နောက်ထပ် မ၀ယ်ယုံတင်မဟုတ်ဘူး အသိမိတ်ဆွေ တွေ လက်တို့လိုက်ရင် ဖောက်သည်မဖြစ်သေးတဲ့ မိတ်အသစ်တွေပါ ဆုံးရှုန်းသွားမယ်။ လက်ရှိ ၀ယ်သူလည်း နောက်မလာ.. ဒါနဲ့ စီးပွားပျက်မှာဘဲ.. အလုပ်ဆိုတာ ရေရှည်လုပ်ချင်ရင် သမာသမတ် ကျကျ လုပ်တာ အကောင်းဆုံးဘဲ.. လူတွေ ရဲ့ သိက္ခာနဲ့ တန်ဖိုးက ၂၀၀ ထက်မက တန်တယ်။